Automatic ice igbe kuki iji kuki na-eme igwe - China Shanghai Hanjue Machinery
Automatic ice igbe kuki iji kuki Ndinam igwe
Description: The e kuki nwere ike ahaziri na ụdị imewe. O yiri ọtụtụ ụzọ na-eme ka kuki, ụfọdụ obere ụlọ ahịa na nwunye na-eme ka nri site n'aka, o nwere a ịtụnanya price na dị iche iche afọ ndị mmadụ dị ka nke a nri. The ozi ọma bụ na anyị HJ-860 encrusting igwe nwere ike ime ka nri na-elu ikike. Anyị engineer ga tinye a waya ịkpụ na igwe ka kuki, otú a pụrụ ichekwa ego na-eme ka ihe ọma anya kuki. Ị nwere ike pịa video ahụ otú igwe na-arụ ọrụ an ...
The ozi ọma bụ na anyị HJ-860 encrusting igwe nwere ike ime ka nri na-elu ikike. Anyị engineer ga tinye a waya ịkpụ na igwe ka kuki, otú a pụrụ ichekwa ego na-eme ka ihe ọma anya kuki. Ị nwere ike pịa video ahụ otú igwe ọrụ na nsogbu ọ bụla biko kpọtụrụ anyị ahịa.
model nọmba HJ-860
1) ọtụtụ ụdị kuki Ebu nwere ike e.
2) ahaziri igwe, anyị nwere ike tinye ụfọdụ igwe usoro na igwe.
3) English, Chinese, Arabic asụsụ ndị nhọrọ ..
4) free ọzụzụ ga-awa mgbe ahịa testing igwe.
Previous: Automatic ice ude mochi Ndinam igwe
Next: Automatic azụ bọl anụ bọl eme igwe
Automatic Brazil chicken coxinha Ndinam igwe
Automatic jupụtara nkeewa akara kuki-eme igwe